Giò & Giulia, voromahery mpivahiny ao Milan | Ny androaniko
[Ankapobeny ] 08 Mey, 2018 19:13
Giò & Giulia, voromahery mpivahiny ao Milan
​Mahafinaritra ny fandroson'ny teknolojia indrindra rehefa anomezana fahafahana ny olon-tsotra hanaraka moramora ny fiainan-tokantranom-biby. Marina fa rehefa entin'ny hazakazaky ny fiainana sy rehefa tsy dia mahay loatra ny mombamomba azy ireny tsy azo onona akory fa ao an-drenivohitra be toa an'i Milan sy ny trano be mijoalajoalany dia afaka monina ao koa ny voromahery.
Nanorina akany ao an-tampon'ny tranobe an'ny orinasa Pirelli ao manko izy ireto satria ireny voromahery mpivahiny (faucon pélérin) ireny dia tia sy afaka miaina an-tanàn-dehibe ka matetika dia eny ny toerana avo no fidiany. Ary io trano mijoalajoala io dia isan'ny avo indrindra ao Milan, 32 rihana ary isan'ny nalaza ho avo indrindra tatý Eoropa tamin'ny taona 60'. Natao ho biraon'ny orinasa mpanao kodiarana Pirelli izy tany am-boalohany fa ankehitriny kosa dia ao ny foiben'ny "Regione Lombardia" ka anatin'ny andraikitry ny "Regione" izany ny fiahiana ihany koa ny zavaboary, biby sy zavamaniry ao amin'io faritra io.
Rehefa tsikaritry ny mpiasa ao amin'ity trano avo ity ireto vorona dia nampandre ny manam-pahaizana manokana momba izany izy ireo ka nanomboka teo dia nametrahana fakan-tsary miafina hanarahana andro sy alina ny fiainan'izy ireo tao an-tafontrano tao. Nasiana ihany koa lafika natao hanatodizana. Nomena anarana izy mivady : Giò ilay lahy ary Giulia ilay vavy. Ny antony dia satria Giovanni Ponti - Giò no anaram-bositra fiantso azy - no teknisianina namolavola ilay trano mijoalajoalan'ny Pirelli, ary Giulia Vimercati ny vadiny.
Napetraka ho an'ny daholobe ny rohy hanarahana izany ho an'izay liana sady mba hiarahana miasa ihany koa. Ka raha sendra misy mahatsikaritra zavatra hafahafa dia mampandre malaky ny tompon'andraikitra. Zava-dehibe sy zava-baovao tokoa ny fahafahana manaraka ny fivoaran'ny natiora, tsy mila mandeha lavitra fa eo amin'ny solosaina na amin'ny finday dia afaka manaraka ny fomba fandatsahany ny atody, ny fanafenany azy, ny fahafoizan'ilay atody - hmmm mampihetsi-po na dia zavatra efa hay ihany aza - ny famahanan'izy mivady ireto zaza, sns. Mahavariana daholo izay ataon'ireto vorona, mandeha mihaza (ny voromahery dia haingana be amin'ny fihazana vorona eny am-panidinana fa mahalana izy vao maka biby mipetraka izany) dia mody mitondra ny sakafo dia mamahana ireto zaza. Eo amin'ny isaky ny adiny roa eo rizareo miverina mitondra sakafo.
Tamin'ny herinandro iny nisy nahatsikaritra fa naratra ilay renim-borona ary tsy hita nandritra ny roa na telo andro. Niasa saina tsisy toa izany izahay. Nisy tsy natory fa nahavatra tsy niala teo amin'ny efijery ny maso, ny sasany nahavita nametraka ny finday teo anoloan'ny solosaina dia nanodina horonana ny zava-miseho. Vaky vava ihany koa mahita ny fikarakaran-drainy ireto voronkely satria raha vao teraka ireny dia mbola atolotra eo am-bavany aloha ny sakafo. Mihorakoraka toy ny zaza daholo mahita azy tonga miaraka amin'ny haza, dia mamahana ireto zaza fa reniny mbola marary dia nanjavona. Nitsinjaka daholo nony nipoitra tampoka i Giulia. Soa fa tsy re ny tabatabanay fa raha tsy izany angamba dia efa tsy tafapetraka tao intsony rizareo.
Androany izao dia efa hita fa manomboka mivoaka ny volom-borona maintimainty ao ambany elatr'ireto zaza. Misy iray efa manomboka mikopak'elatra dia mianjera izay fa mbola tsy mahazaka tena.
Dia io indray aloha ny mahavariana ahy ato. Ankoatra azy dimy mianaka dia mahasondriana ahy koa ny mitazana ity tanàna ity amin'ny ora isan-kazarany : vao mangirandratsy, antoandrobenanahary, avy orana, alimbe, sns. Io hariva io ohatra dia avy ny orana, nisy tselatra be teo dia io i Giulia (mino aho) fa ery ambony "climatiseur" izy no mihaminkamina sady miambina ny zaza.
0 Hevitra | "Giò & Giulia, voromahery mpivahiny ao Milan"